तालिबान अफगतानिस्तानको सत्तामा फर्किएपछि बाबुरामले लेखे- हामी पनि सतर्क बन्ने कि ! – Janadesh Daily | ePaper
तालिबान अफगतानिस्तानको सत्तामा फर्किएपछि बाबुरामले लेखे- हामी पनि सतर्क बन्ने कि !
August 16, 2021 August 16, 2021 by Jandesh Daily
अफगानिस्तानमा विद्रोही समूह तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले हामी पनि बेलेमै सर्तक हुनुपर्ने बताएका छन्।
तालिबानका लडाकुले देशका प्रमुख सहर कब्जापश्चात् आइतबार मात्र अफगानिस्तानको राजधानी काबुल प्रवेश गरी त्यहाँको राष्ट्रपति भवन कब्जा गरिसकेका छन्। उनीहरू काबुल प्रवेश गर्नासाथ त्यहाँका राष्ट्रपति असरफ गानी देश छाडेर भागिसकेका छन्।
यसै सन्दर्भमा जनता समाजवादी (जसपा) पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. भट्टराईले मुलुकमा सबल प्रगतिशील लोकतान्त्रिक विकल्प भएन भने यस्तै अवस्था आइपर्ने भन्दै सजग गराएका हुन्।
‘भूराजनीतिक हिसाबले संवेदनशील अफगानिस्तानमा बाह्य शक्तिको सैनिक हस्तक्षेपको अन्त्यपछि सत्तामा धार्मिक कट्टरपन्थी समूहको पुनरागमनले देशमा सबल प्रगतिशील लोकतान्त्रिक विकल्प भएन भने जनता कसरी कराइबाट उम्केर भुंग्रोमा पर्दारहेछन् भन्ने पुनः पुष्टि भयो है,’ डा. भट्टराईले भनेका छन्, ‘हामी पनि वेलैमा सतर्क बन्ने कि?’
राष्ट्रपति कार्यालयमा तालिबान लडाकु पसेसँगै अफगानिस्तानमा अमेरिकासमर्थित सरकारको अन्त्य भएको छ। अब तालिबानहरू सम्मिलित अन्तरिम सरकार बन्ने जनाइएको छ तर यसको विस्तृत खाका आइसकेको छैन।
तालिबानका प्रवक्ताले अब अफगानिस्तानमा युद्ध समाप्त भएको बताएका छन्।
उता देश छोडेका राष्ट्रपति घानीले रक्तपात रोक्न आफू बाहिरिएको बताएका छन्। उनी अहिले कहाँ छन् भन्ने औपचारिक जानकारी दिइएको छैन।
Posted in बिचित्र संसार, मुख्य समाचार, राजनीति, सामाजिक सञ्जाल